Esi sahluko sokuqala sazisa ngemixholo ekuthethwa ngayo kule ncwadi. Inika umfundi kwangoko umxholo kunye nesiseko sencwadi yonke. Ngenxa yoku, sinika iinguqulelo zomgangatho woluntu kwintshayelelo xa sikwazi. Siyawaxabisa kakhulu amavolontiya athe anceda iLizwi Foundation ukwenza uguqulelo lwesi sahluko sokuqala lufumaneke. Nceda uqhakamshelane nathi ukuba ungathanda ukufaka isandla ekuguquleleni iNtshayelelo kwezinye iilwimi.